Home Wararka Diiwaangelinta musharrixiinta xilka Madaxweynaha oo Maalintii Saddexaad ka socoto muqdisho
Diiwaangelinta musharrixiinta xilka Madaxweynaha oo Maalintii Saddexaad ka socoto muqdisho
Guddiga doorashada Madaxweynaha soomaaliya ayaa Maalintii Saddexaad oo xiriir ah waxaa ay Magaalada Muqdisho ka wadaan diiwaangelinta musharrixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Guddiga ayaa diiwaangeliyay 32 Musharrax, labadii maalin ee lasoo dhaafay, iyagoona galinkii hore saaka gudiga ay dib u bilaabeen shaqada diiwaangalinta musharixiinta xilka madaxweynaha soomaaliya.
musharrixiinta ugu horreeyay ee isdiiwaangeliya Maanta waxa ay kala ahayaayen: Musharrax Madaxweyne Maxamed Amiin Faarax, musharax Saciid Cabdullaahi Deni, iyo Musharax Sakariye maxamuud xaaji Cabdi.
Wili waxaa harsan musharixiin kale oo doonaya in ay isdiiwaangaliyan saacadaha soo socdo.
Galinka danbe ee maanta abaaro 4:00pm ayaa lagu wadaa Xubnaha Guddiga ay soo geba-gabeeyaan diiwaangelinta musharrixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
15-ka Bisha May oo ku beegan Maalinta Axadda ah ee soo socota ayuu qorshuhu yahay qabashada doorashadada madaxweynaha 10-aad ee jamuuriyadda federaalka soomaaliya
Previous articleBeesha caalamka soo dhoweysay diiwaan galinta musharraxiinta madaxweynaha
Next articleAadan Madoobe oo kormeer deg deg ah ku tegay teendhada Afisyoone
Askar ka tirsan ciidamada dowladda Federaal oo Muqdisho lagu dilay
Dowlada Soomaaliya oo mamnuucday Hay’adda Sahan Research in ay dalka ka...